Qaban-qaabada munaasabad uu hadal ka jeedinayo Axmed Madoobe oo ka socota Kismaayo – Hornafrik Media Network
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe ) ayaa goor dhaw la filayaa in uu magaalada Kismaayo ka furo kal-fadhiga baarlamaanka maamulka Jubbaland, kuwaas oo galay fasax laba bilood ah.
Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa lagu wadaa in uu khudbad ka jeediyo xafladda furitaanka kalfadhiga baarlamaanka Jubbaland, oo haatan ku jirta qaban qaabadii ugu dambeysay.
Furitaanka kaldhafiga baarlamaanka ayaa kusoo aadaya iyadoo Khamiistii lasoo dhaafay ay guddiyada joogtada ah ee baarlamaanka Jubbaland ay Axmed Madoobe u kor dhiyeen waqtiga la doonayo in uu kusoo dhiso golihiisa wasiirrada, oo ay ugu dareen mudo laba bilood ah.
Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa lagu wadaa in uu munaasabaddas ka jeediyo khudbad dhinacyo badan taabanaysa, taas oo sida aan xogta ku heleyno uu uga hadli doono khilaafka maamulkiisa kala dhexeeya madaxda dowladda federaalka, xiisadda dagal ee ka taagan gobolka Gedo, dhismaha xukuumaddisa iyo arrimo kale.
Nin oday ah oo si naxdin leh iskugu dilay Muqdisho